Kodi dia misy amin'ny Apple TV 4 | Vaovao IPhone
Ho an'ny maro, efa misy ny antony tena lehibe amin'ny fividianana Apple TV: Kodi, ilay haino aman-jery fampahalalam-baovao multiplatform malaza dia azo apetraka ao amin'ny Apple TV, saingy misy printy kely vitsivitsy amin'ity vaovao ity: Ity dia kinova voalohany indrindra ary tsy ho hitanao izany ao amin'ny App Store, fa tsy maintsy apetakao amin'ny alàlan'ny Xcode, ka mila Mac koa ianao hahavita azy.
Ny mpandrindra tenany dia nanaiky fa ny kinova vao navoakany dia efa alohan'ny alfa, izany hoe, miteny amin'ny fomba azo zahana izy tsy hametraka azy ary ny hany tadiaviny dia ny fantatsika fa efa eo am-pandrosoana ny fampiasa ny fisian'ity sehatra vaovao ity ary efa manana kinova voalohany hiasa amin'ny bug izay mety ananany izy ireo ary poloney alohan'ny handefasana kinova "Beta" ary dika farany. Na dia izany aza dia tadidio fa ity fampiharana ity, noho ny toetrany, dia tsy afaka ny ho ao amin'ny App Store mihitsy, ka tsy maintsy ampiasaina ny fomba fametrahana hafa.
Kodi dia mpilalao haino aman-jery maro sehatra ary haino aman-jery marobe, fa ny lazany lehibe dia tratry ny zava-drehetra ny mety hametrahana plugins ahafahanao mijery fantsom-pahitalavitra amin'ny Internet, maimaimpoana na karama, ary na dia afaka mankafy ireo andian-tantara tianao na sarimihetsika amin'ny alàlan'ny streaming aza, tsy mila manahy momba ny fisintomana azy ireo aloha. Ireo toetra ireo no lazaiko rehefa milaza aho fa tsy ho ao amin'ny App Store mihitsy, satria manitsakitsaka mazava tsara ny fepetra takin'i Apple izy ireo. Hihaino tsara ny fivoaran'ny tetikasa izahay, fa amin'izao fotoana izao raha misy te hanandrana azy dia manana izay ilainao rehetra ao izy Kodi forum, saingy manizingizina izahay fa amin'izao fotoana izao dia tsy mendrika ny manandrana mametraka azy satria ho tratry ny lesoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Kodi dia misy amin'ny Apple TV 4 izao
Hadrien dia hoy izy:
IZAHO NO NAMETRAKA AN'IZANY ARY efa niasa sy nitsapa azy
Mieritreritra aho fa ho VERSION 17.0 JARVIIS PREBETA
kodi dia tena milamina
misy addon tsy mandeha tsara
Misy safidy hafa
IZAY IZAY MAMetraka Super REPO »
Ho hitanao ao ny kinova ho an'ny kinova jarvis ho an'ity kidi ity izay avy amin'ilay mpamorona iray ihany
Anisan'ireo efa miasa ho ahy ianao
1Channel na hafa
ary ho an'ireo tia ny tripe xxx- vaovao tsara
Tube 8 lubetube video devoly Youjizz dia mandeha
ka raha ny fahitako azy dia azonao apetraka ity kinova ity
raha misy PLUIG »
TSY mihazakazaka azy ireo ary tsy avelany hiditra any KODI intsony izy ireo
TSY OLANA IZAO FA MANAO RESET AMIN'NY APPLE TV4 fotsiny
ARY IREO ZAVATRA MISORATRA NY ZAVATRA MISY
Tadidio fa izany no vidin'ny fananana zavatra maimaim-poana
TSY MISY MAHAY Lavorary, TSY MBA VOLA FA MAIMAIMPOANA !!
Valiny tamin'i Adriano
Toa tena ilaina ny hevitrao fa tsy afaka mametraka plugin aho.
Azonao lazaina amiko ve ny fomba?
Markitos dia hoy izy:
Napetraka, ary milamina kokoa noho ny voalaza ao amin'ny paositra izy io, satria hitanao fa noho ny tsy fahalalana tanteraka no nanatanterahan'ilay nanoratra an'ity lahatsoratra ity.
Mety ary mandeha tsara, marina fa misy addlons tsy mahomby nefa ara-dalàna, miasa be mpampiasa indrindra
Mamaly an'i Markitos
JalexFILMS dia hoy izy:
Miarahaba an'ireo rehetra napetrako kodi ary ho fampahalalana ho an'ireo olona mametraka addons avy amin'ny rakitra zip dia nahita vahaolana momba ny fametrahana azy ireo ao amin'ny rafitra. Amin'ny fampiasana fampiharana avy amin'ny mac antsoina hoe iExplorer, mampifandray ny apple tv amin'ny mac ianao ary afaka mahita ny lahatahiry rehetra ianao, mitady kodi ary kopia ireo rakitra zip rehetra ao anaty fampirimana an-trano. Eny fa na dia tonga lafatra aza ny zava-drehetra fa hitako fa tsy mandeha ny addon sasany toy ny "chicago team" wolf team "ary maro ny hafa mandefa error fa tsy noho ny plugins python izay henoko no tsy tafiditra ao amin'ity kinova kodi ity. raha nisy naharesy ny Install dia tsara ny milaza ny fomba hahatratrarako azy, antenaiko fa nahita izany nanampy tamin'ny fomba vitsivitsy, arahabaina ho an'ny rehetra.
Valio amin'i JalexFILMS
Salama, manao ahoana ianao jalexFILMS,
Inona ny dikan'ny kodi napetrakao amin'ny Apple TV 4 anao?
Tsy nahavita nametraka addons avy amin'ny zip aho.
Eto amin'ity pejy ity no misy ny kinova kodi an'ny Apple TV 4….
Tsy haiko izay kinova napetrakao
Salama jose azafady amin'ny fanemorana ny famaliana fa nanana fotoana be atao aho. Fa avelao aho hanazava fa misy rindranasa amin'ny mac antsoina hoe iExplorer izay tsotra be dia tsotra ianao manokatra ny fampiharana ary mampifandray ny apple tv 4 amin'ny solosaina amin'ny tariby karazana USB usb izay tsy maintsy efa nataonao mba hanaovana an'io dingana io. Efa mahafantatra anao tsara izy amin'izao fotoana izao dia mankany amin'ny vakizoro fampiharana ianao ary hivoaka tsara ny fampiharana apetrakao amin'ny apple tv izao dia mankanesa any amin'ny kodi ianao ary mitady ny fampirimana an-trano ampidirinao sy ao amin'ny fampirimana haino aman-jery izay adikao ny addons dia izay ry zoky, ny addons amin'ny zip dia efa ao anaty apple tv. ankehitriny ianao dia mampifandray ny apple tv amin'ny efijery fotsiny ary mametraka ny addons avy amin'ny zip dia mitady an'ity fampirimana ity izay nandika ireo rakitra sy bommmmmm. izao misy vaovao ratsy omeko anao ny ankamaroan'ny addon dia tsy mandeha. ny kinova ampiasaiko dia 16.0 jarvis. Raha misy olona manana fanavaozana fa miasa tsara ireo addons dia tsara ny mampahafantatra ny arahabaona ary manantena aho fa nanampy anao.
chamanazoMIguel dia hoy izy:
Nametraka azy io aho androany tao amin'ny Apple TV 4, apetrakao ao amin'ny MAC ihany koa ary ny maha samy hafa azy dia ny Addons rehetra miasa amin'ny iray faharoa fa tsy amin'ny Apple TV. Tsy miasa izy ireo; Catoal, Adryanlist, live stream pro ary ny sasany amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'ny atiny espaniola. Ny sarimihetsika a la carte dia mandeha fa tsy ny atiny rehetra, amin'ny MAC kosa, mandeha tsara.
Ahoana ny fametrahana ny zip, tsy maintsy nataoko tamin'ny windows, tamin'ny MAC dia tsy afaka aho. Ao amin'ny Windows dia mankany amin'ny fampirimana ianao, mizara ny bokotra havanana ary avelanao ho kilemaina ny teny miafinao. Avy eo ianao dia mankany amin'ny C, mpampiasa ary vahiny ohatra ao amin'ny folder Donloaw avelanao ny fisie ZIP.
Mandehana any amin'ny Kodi, System, Addons ianao, mametraka avy amin'ny ZIP, misafidy samba wimdows, ary mitady mpampiasa, vahiny, dowloaws ary apetrakao ny fikolokoloana tadiavinao. Mametraka azy ireo tsara, saingy tsy mandeha izy ireo avy eo.
Heveriko fa ny olana dia Kodi dia maintso ho an'ny Apple tv.
Omaly rehefa nametraka ireo fantsona iptv dia nianjera i Kodi ary tsy maintsy nofafako ary nametraka azy io indray.
Manantena aho fa nazava tsara
Valio amin'i chamanazoMIguel
Misaotra anao. Andraso ny famoahana kinova azo antoka kokoa
Ny marina dia tsy mandeha ny ankamaroan'ny addons
Prey dia hoy izy:
raha miasa daholo dia io adrianlist io ihany no tsy miasa amin'ny super repo fa ny mametraka avy amin'ny repo hafa raha mandeha dia tsy olana amin'ny kodi ny tenany fa amin'ny repo
Valiny amin'i PREY
Azonao atao ny mandefa ireo repo izay misarika azafady fa tena napetraka avy amin'ny zip avy amin'ny repo amin'ny fomba rehetra ary tsy misy lesoka ny addon any Chicago alaina mivantana avy amin'ny pejy ofisialy izay nohavaozina ary tsy misy lesoka mandefa ireo repo hijerena raha misy vintana ary izaho maneho hevitra ny nandehanany mialoha, misaotra
Notsipahan'ny mpitsara ny fitoriana noho ny hafatra tsy nalefa tamin'ny fitaovana Android
Ny ResearchKit dia hanadihady mba hitsaboana ny hépatite C